Izithakazelo zakwaMsane nomlando wabo – The Ulwazi Programme
Mgobhozi owehl’ entabeni,
Madl’ uvalo lwengonyam’ abanye bedl’ olwenkomo,
Lombo kaLokothayo ongalokothwa,
Delela, Mvune owavuna kuqala abanye bengakavuni,
Joka lensimbi elingaphuki abanye bebophela ngawokhuni,
Abantu bakwaMsane batholakala ezindaweni eziningi kuleli lakithi eMzansi. Isizwe sakwaMsane sinomlando ojulile kaZulu kusuka emandulo. Umlando wabo usuka esikhathini esiphambi kombuso weLembe kwaZulu, inkosi uShaka.
Ngesikhathi inkosi uShaka ithatha isihlalo sobukhosi KwaZulu, sekukhothame uyise, iNkosi uSenzangakhona, iLembe lasebenzisa amaqhinga okuthi izizwe ayezihlasele wayezinqoba, wayezifaka phansi kombuso waKwaZulu. Kanjalo nasesizweni saKwaMsane.
Ngalesisikhathi isizwe saKwaMsani sasingaphansi kwenkosi yaso uNxaba kaMbhekane kaSontuli. Inkosi uNxaba kayikuvumanga ukuba ibe ngaphansi kombuso waKwaZulu, wakhetha ukufuduka walibhekisa enhla nezwe. Lapho yona nabantu bayo nabezinye izizwe ezazingaphansi kwabakwaMsani, yahamba yalibhekisa eSwaziland.
Mayifika khona, ayizinzanga kodwa yahamba yaze yayofika kwelase Mozambique yafika lapho yakha ngasosebeni lomfula obizwa ngokuthi yiBusi. Lapha yabusa iminyaka elishumi kwase kuthatha iNkosi yakwaShabangu. Abanye bakwaMsani bakhetha ukusala eSwaziland bakhonza ngaphansi kwamakhosi akhona. Abanye behla baze bafika ogwini oluseningizimu nezwe manje eseliyisifundazwe iKwaZulu Natal, beholwa nguNonjonjo wakwaMsani.
Lokhu kwenzeka ngemuva kokuba inkosi uDingane nomfowabo uMhlangana sebebulele iLembe, iNkosi uShaka. Yikho lokho okwakwenza kube nokudideka kwabanye ngoba kwakungacaci noma kwase kungamabutho eNkosi uShaka noma base bedudulwa ngamabutho eNkosi uDingane, Isidindi Somtshiki.
Uma beyisho indaba abayaziyo bathi, kungathi inkosi uNonjonjo yafika yazinza lapho kuthiwa khona kuseMzinto, ziningi ezinye izindawo okubikwa ukuthi basabalala baya kuzona, ngaphandle nangaphakathi Kwazulu Natal.
Nanka amaqhawe akwaMsani
UNxaba kaMbhekane iNkosi yesizwe sakwaMsani owayebusa lesisizwe ngaphambi kokubusa kweNkosi uShaka kaSenzangakhona wesizwe samaZulu.
Umgobhozi kaNongqewu yiqhawe elayihlaba umxhwele iNkosi uShaka yaze yalinxusa ukuba lihole elinye lamabutho akhe.
UNtelezi kaKhukhulela wayeyindunankulu yebutho leNkosi uMngeni Msani, izinkumbi ezimfece, ogwini oluseningizimu. Wabe futhi emelene nendaba yentela kakhandampondo eyayifunwa ngamaNgisi.
USaul Msani yisifundiswa nesishoshovu esabe simelene nomthetho womhlaba , iNative Land Act owawuphuca abantu bendabuko ilungelo lobunikazi bomhlaba.
Indlu kaNxaba kaMbhekane
Indlu kaMgobhozi kaNongqewu
Indlu kaNoncadambedu kaNonjonjo
Indlu kaBhalela kaVangise
Indlu kaMajoka kaZashula
Indlu kaMlangazi kaZashula
Indlu kaNtelezi kaKhukhulela
Indlu kaMajiji kaSomtala
Indlu kaZabheda kaMshavu
Indlu kaNtshipheni kaBhukele
Indlu kaMvune kaNdindi.
This article outlines the history and the clan praises of the Msane/Msani people.